Rig ary atsofohy ny rig
Rig fandavahana rotary kely
Fiara fitaterana mpandeha an-tongotra rehetra
Xuzhou Dinghua Construction Machines Co., Ltd.
Xuzhou Dinghua Construction Machines Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpamatsy mpifaninana sy mahay indrindra an'ny XCMG Group.
Manome ampahany mekanika amin'ny XCMG, Caterpillar, Heli Forklift, Liugong, Lingong ary orinasa marobe malaza any China izahay.
Ny ririnina fandavahana rano amin'ny seranana XSL, rig ary atsofoka boribory misy andian-tsarimihetsika XZ ary rig fandavahana rotary andiany XR dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra 30 misy an'i Amerika Avaratra, Afrika, Moyen Orient, Canada, India, Thailand, Malaysia, ary Azia atsimo atsinanana. .
Xuzhou Dinghua Construction Machinary Co., Ltd. (XZDH) dia natsangana tamin'ny taona 2015. Orinasa mpamatsy vola miaraka amina renivola mitentina 10 tapitrisa yuan.
Ny orinasa dia manarona faritra 50.000 metatra toradroa, ao anatin'izany ny trano fananganana orinasa 36,000 metatra toradroa. Izahay dia manana fitaovana maoderina maherin'ny 200 vaovao.
Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana ireo rafitry ny milina fanaovana injeniera marobe izahay ary manodidina ny 20 000 taonina ny fahaizantsika mamokatra isan-taona. Mampiasa milina teknolojia avo lenta ho an'ny CNC, welding, forging ary fitsaboana hafanana izahay amin'ny fizotry ny famokarana.
Ny vokatra lehibe an'ny XZDH dia ny rig ary atsofohy ny rig, ny rig ary atsofohy ny rano, ny rig ary ny faritra misy ny injeniera maro. Izy ireo no kalitao eken'ny firenena.
Ny milina Xuzhou Dinghua Engineering dia manana maodely isan-karazany amin'ny rig ary atsofohy ny rano, ary ny rig fandavahana Rotary. Ny orinasa dia manana injeniera matihanina, mpiasa teknika matihanina, serivisy aorian'ny varotra matihanina, ary manana ny mari-pahaizana fahazoan-dàlana famokarana azo antoka, ny mari-pahaizana fahazoan-dàlana famokarana fitaovana manokana an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, ary ny mari-pahaizana momba ny fiarovana ny orinasa. olona sy tompon'andraikitra amin'ny fitantanana lehibe sy mpandraharaha eo aloha no mitana mari-pankasitrahana.
Ny toe-tsain'ny mpandraharaha ao amin'ny orinasa: hentitra, ambany tany, mandroso ary manavao.
Tanjon'ny orinasa: hitrandraka ny haitao injeniera ary hanome vahaolana ho an'ny fananganana injeniera manerantany sy ny fampandrosoana maharitra.
Ny fampanantenan'ny orinasa maharitra mandrakizay: laza voalohany, miorina amin'ny fahamendrehana, mpanjifa voalohany, serivisy voalohany, fiarovana voalohany, olona mifantoka, kalitao aloha, ary miorina amin'ny laoniny.
Filôzôfia momba ny serivisy an'ny orinasa: matihanina, be fandavan-tena, be fandavan-tena ary be fiheverana mba hahafahan'ny mpampiasa milamina kokoa.
Orinasa sy fahitana an'ny orinasa: mifantoka amin'ny mpanjifa, mampifangaro ny R&D, ny famokarana ary ny loharanom-pahalalana hamorona lanja ho an'ny mpanjifa ary hanampy ny mpanjifa hahatratra fahombiazana amin'ny fahaizana mitambatra kalitao azo antoka, teknolojia mitarika, fiarovana ny tontolo iainana ary fahombiazana Mamaly ny filàna tena izy sy manampy lanja an'ny mpanjifa, ary mahazoa ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny fifampatokisany
Hatao manerantany ny orinasa, manolo-tena hanohy hanome izay ilain'ny mpanjifa, ary ny fanampiana ny mpanjifa hahomby no fototry ny fahavelomantsika sy ny fampandrosoana antsika. Vonona ny hiara-hiasa amin'ny lafim-piainana rehetra ny orinasa, ny faritra rehetra, ny indostria rehetra, ny orinasa rehetra, ny mpanjifan'ny orinasa, ny namana taloha sy ny vaovao dia manangana fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny fitoviana fitoviana sy fisakaizana, tombontsoa sy fandresena ary handresy anao mahatoky.
Telefaona: + 86-18556894445
Adiresy: Xuzhou Dinghua Construction Machining Co., Ltd.
milina fandavahana lavaka, Rig ary atsofohy amin'ny familiana, milina fandavahana hdd, hdd rig,